ज्ञानी र ठूलो मान्छे बन्नू भनेको के हो बाबा? :: Setopati
ज्ञानी र ठूलो मान्छे बन्नू भनेको के हो बाबा?
सुनबी पोखरेल असोज १५
म सानैदेखि मेरो हजुरबुबा, हजुरआमा, दादा, बाबा र मामुको साथमै हुर्केकी हुँ। हाम्रो परिवारमा २८ जना हुनुहन्छ जसले गर्दा हजुरबुबा र हजुरआमासँग भेटघाट गर्न प्रायः जसो प्रत्येक शनिबार र आइतबार हाम्रो घरमा सबैजना भेला हुनुहुन्छ।
मलाई सानैदेखि घरका परिवार आउँदा आफूभन्दा ठूलो मान्यजनलाई दर्शन गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यसैले म शिर निहुराउँदै सबैलाई दर्शन गर्छ। मैले दर्शन गरेपछि सबैले मेरो शिरमा हात राखेर एउटै शब्द भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो हो 'ज्ञानी हुनू, ठुलो मान्छे बन्नू।'
बाल्यकालका धेरै कुराहरू मलाई स्मरण छैन तर पनि मेरो मानस्पटलमा एउटा कुरा सधैं स्मरणीय छ। त्यो हो- सधैँ सबैले मलाई ज्ञानी हुनू, ठुलो मान्छे बन्नू भनेर आशिर्वाद दिनुभएको। कतिपयलाई त मैले हवस् पनि भन्ने गरेकी छु। तर मलाई सधैँजसो कौतुहल हुन्थ्यो कि यो ज्ञानी हुनू, ठुलो मान्छे बन्नू भनेको चाहिँ के रहेछ त?
म सानै उमेरदेखि खाइलाग्दि थिएँ रे। जन्मिँदै पनि ४ केजी तौलकी अरे। म जन्मने बेलामा तौल बढी भएरै होला ममीको अप्रेसन गर्नु परेको थियो रे। मेरो न्वारनको नाम ‘टा’ बाट उठेको रे अनि हिमाल जत्री छे यसको नाम ‘टाकुरा’ नै राख्नुपर्‍यो भनेरै टाकुरा राखेको रे, ममीले भन्नुभएको।
म अहिले उमेरले १३ वर्ष भए पनि उचाइका हिसाबले ५ फिट ५ इन्चकी छु। सबैले मलाई हेर यो त कति ठूली भएकी भन्नुहुन्छ। तर पनि जब म आफूले मान्नुपर्ने मान्यजनलाई दर्शन गर्न जान्छु अझ पनि मलाई उही शब्द भन्ने गर्नुहुन्छ, 'ज्ञानी हुनू, ठूलो मान्छे बन्नू।'
कत्ति जनालाई त मैले 'म ठूली त छु नि, अब कति ठूली हुनु र' भनेर भनेकी छु । तर प्रतिउत्तरमा यो पनि ठट्टा गर्न थाली भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो।
म अब क्रमशः ठूली हुँदै छु। मेरो अध्ययन पनि राम्रै छ भन्नुहुन्छ। घरपरिवारमा मेरो बारे कुरा हुँदा यो ज्ञानी नै छे भन्ने कुरा हुन्छ तर पनि मलाई सधैँ एउटै कुरा 'ज्ञानी हुनू, ठूलो मान्छे बन्नू' किन भनिरहनु भएको होला?
यसले मलाई जहिले पनि कौतूहल बनाउने गर्छ। त्यसैले मैले एक दिन मेरो बाबालाई सोधेँ, 'बाबा, यो ज्ञानी हुनू, ठुलो मान्छे बन्नू भनेको के हो? के म ज्ञानी छैन र? अनि म ठूली पनि त छु नि हैन?'
मेरो प्रश्न नटुङ्गिदै बाबाले भन्नुभयो, 'हो तिमी ज्ञानी छौ, अनि ठूली पनि छौ।'
मैले पुनः प्रश्न गरेँ, 'अनि मलाई सधैँ सबैले किन ज्ञानी हुनू, ठुलो मान्छे बन्नू भन्नुहुन्छ तरु यसको अर्थ के हो बाबा?'
मुसुक्क हाँस्दै बाबाले मेरो हात समाउनुभयो, मलाई माया गर्नुभयो र यसको अर्थ सुनाउन थाल्नुभयो। बाबाका अनुसार ज्ञानी हुनु भनेको असल ज्ञान प्राप्त गर्नु हो, यो अनवरत र जीवन पर्यन्तसम्मको कुरा हो। शिष्टता, नम्रता, भद्रता, सालीनता जस्ता स्वभावहरू ज्ञानी व्यक्तिका लक्षण हुन्।
द्वेष, रिस, इर्ष्या, लोभ, मोह, घृणा आदि अज्ञानी व्यक्तिका लक्षणहरू हुन्। ज्ञानी व्यक्तिले अरुको सधैं आदर गर्छ, दुःख परेकाप्रति सहानुभूति देखाउँछ र सहयोग गर्छ। आफ्नो कामप्रति सधैं बफादार हुने र इमान्दारीता भएको व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति हो। पढाइमा अब्बल हुने, मिहिनेत गरी पढ्ने, नढाट्ने, सत्यको पछि लागि असत्यको विरोध गर्ने, बुबा, आमा र परिवारको रेखदेख र हेरचाह गर्ने, आफन्तलाई आदर गर्ने व्यक्तिहरू ज्ञानी स्वभावका व्यक्ति हुन्। ज्ञान धेरैले प्राप्त गरेका हुन्छन् तर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्दैमा ज्ञानी मान्छे नहुने रहेछ। आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानबाट खराब किसिमका ज्ञानहरूलाई छाडेर असल ज्ञानलाई जीवनचर्याको रुपमा लैजाने व्यक्ति मात्र ज्ञानी व्यक्ति हुँदोरहेछ।
ज्ञानी हुनु जीवनको सबैभन्दा ठूलो विषय रहेछ। जो ज्ञानी हुन्छ, त्यो मात्र ठूलो हुँदो रहेछ। साधारणतया अज्ञानी व्यक्ति कुनै ठूलो जिम्मेवारीमा रहन सक्दैन र रहिहाल्यो भने पनि उसको योगदान ठूलो हुन सक्दो रहेनछ। तसर्थ ज्ञानी व्यक्तिहरूमा ठूलो मान्छे बन्न सक्ने लक्षणहरू ज्यादा हुँदा रहेछन्।
अज्ञानी व्यक्ति ठूलो मान्छे हुनु भनेको अपवाद जस्तो रहेछ। तसर्थ मलाई ठूलो मान्छे हुनु भनेको उचाइमा र तौलमा ठूलो हुनु भनेको होइन रहेछ। ठूलो हुनु भनेको त सबैले मान्ने हुनु, आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठा देश विदेशमा फैल्याउन सक्ने व्यक्ति हुनु पो भनेको रहेछ।
ज्ञानी हुनु आफ्नो जीवनको नियमित कर्म रहेछ । केटाकेटीहरूले बिहान सबेरै उठ्ने, उठ्नेबित्तिकै हात, मुख धुने, नियमित व्यायाम गर्ने, नियमितरुपमा विद्यालय जाने, विद्यालयमा राम्ररी पढ्ने, गृहकार्य नियमित रूपमा गर्ने, असल साथीसँग सङ्गत गर्ने, कोही खराब रहेछ भने पनि असल बनाउन प्रयन्त गर्ने, घरमा आमा बुबाको रेखदेख गर्ने, वृद्ध उमेरमा उहाँहरूप्रति आदरभावका साथ लालनपालन गर्ने, दीनदुखीप्रति श्रद्धाभावसहित सहयोग गर्ने, हरेक काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने, जन्मभूमि र जन्मराष्ट्रप्रति भक्तिभावमा रहने, कसैप्रति पनि नराम्रो बोली र व्यवहार नगर्ने, धेरै सुन्ने–थोरै बोल्ने–धेरै काम गर्ने जस्ता कार्यहरू नै ज्ञानी हुनु रहेछ।
ज्ञानी हुँदै गयो भने ठूलो मान्छे अवश्य भइने रहेछ। तसर्थ मलाई सबैले भन्ने गरेको ‘ज्ञानी हुनू, ठुलो मान्छे बन्नू’ भनेर कसैले दिने आशीर्वाद सुन्दामा साधारण भए पनि यसको महत्व र अर्थ अत्यन्तै ठुलो हुँदो रहेछ।
बाबाले भनेका यस्ता वचन सुनेर मभित्र ‘ज्ञानी बनी र ठूलो मान्छे हुने’ कुरामा अझ अभिप्रेरणा मिलेको छ। म सबैलाई ज्ञानी भई ठूलो मान्छे बन्न उत्प्रेरित पनि गर्न चाहन्छु।
(सुनबी पोखरेल डियरवाक सिफल स्कुल, काठमाडौंमा कक्षा ८मा अध्ययनरत छिन्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १५, २०७७, ०३:२१:००